အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » ဂျော့ဘ် » အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ
TBA (သာမပါ / အနိမ့် paid / ကော်မရှင်)
ကျွန်ုပ်သည်ယူအက်စ်တွင်လွတ်လပ်သောရုပ်ရှင်၊ ငါရုပ်ရှင်နှင့်တီဗီစက်မှုလုပ်ငန်းကိုသိသူတစ် ဦး စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိုအပ်ပါတယ်။
ငါ KY & TN အတွက်ပစ်ခတ်ခံရဖို့တစ်ထုတ်လုပ်သူများ၏လက်၌တဦးတည်းရုပ်ရှင် / ရုပ်သံစီးရီးစီမံကိန်းကိုရှိပေမယ့်ဆက်သွယ်မှုရှိပြီးအတှေ့အကွုံရှိသူတစ်ဦးစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်လိုအပ်ပါတယ်။ ငါဖန်တီးမှုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်၏ ငါတိုက်ရိုက်, 3D အတွက်ဒီဇိုင်းဇာတ်ကောင်ပါဘူးရေးရန် အထူး FX စသည်တို့ကိုတက်အောင်
ငါလုပ်ငါလိုခငျြအများအပြားပိုပြီးသဘောတရားများရှိပေမယ့်ငါသညျဤစက်မှုလုပ်ငန်းများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအတွေ့အကြုံကိုရှိသည်။ ကျွန်မကိုလည်း Walking Dead, Nashville Insight web studio ၏ခဲ့ကြသူအဆက်အသွယ်ရှိသည်။ ငါသည်ဤကုမ္ပဏီစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပေမယ့်သင်တို့ကိုငါထိုသို့ပြုမှပိုက်ဆံရှိပါကဒီစက်မှုလုပ်ငန်းငွေကြေးနှင့်ဘာမှမများပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်သောကွောငျ့အကြှနျုပျကိုတစ်ဦး LLC ဖြစ်လာကူညီစီမံကိန်းများအတွက်ရံပုံငွေရှာဖွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆုံးသိတယ်နိုင်သူတစ်ဦးဖက်ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်လိုအပ်ပါတယ်။
ငါ 30 ကုမ္ပဏီ၏%, ကြော်ငြာနှင့်ဤလုပ်ငန်းကို၏အခြားဒြပ်စင်များအားလုံးပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအဓိကစီမံကိန်းတစ်ခုကျွန်တော်တစ်ဦးရုပ်သံစီးရီးလုပ်နေပါလိမ့်မည် (အဆိုပါထုတ်လုပ်သူယခုဆွေးနွေးမှု၌ရှိ၏) သွားပြီးတာနဲ့။ ငါ၏အဆုံးစွန်ရည်မှန်းချက်တစ်ခုအချည်းနှီးသောဂိုဒေါင်ကိုဝယ်ကာရုပ်ရှင်စတူဒီယိုသို့လှည့်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဤသည်မဟုတ်သောယခုများအတွက်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်စီမံကိန်းများကိုငွေရှာသည့်အခါငါတို့ရှိသမျှသည် payed ရ။ သငျသညျစားပွဲပေါ်မှာမှဆောင်ကြဉ်းနိုင်သလဲဆိုတာငါ့ကိုပြောပြပါ! ရဲ့တချို့အမှန်တကယ်အလုပ်လုပ်ကြရအောင်! အသေးစိတ်ကိုအီးမေးနှင့်ကျွန်တော်အကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ ယခုတွင်ငါသည်အဘို့အ Fulton KY အတွက်ဖြစ်ကြောင်းကိုဒါပေမယ့်ကျနော်တို့စတင်ရန်တစ်ချိန်က Nashville ပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်လိမ့်မည်။ ငါကားမောင်းအကွာအဝေးအတွင်းတစ်စုံတစ်ဦး, 2-4 နာရီ, သို့မဟုတ်ရန်နှင့်ကနေပျံသန်းနိုင်သူတစ်စုံတစ်ဦးကိုပိုကြိုက်တယ်။
ဆိုးကျိုးများအပြီး ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ အသံလွှင့် အလုပ်အမှုဆောင်ထုတ်လုပ်သူ photoshop ထုတ်လုပ်မှု က Ultra HD ဖိုရမ် ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ခြင်း 2017-11-30
ယခင်: ထုတ်လုပ်သူ / Editor ကို